NextMping | Professional Development Zvinangwa zveTemu
Iyo yeramangwana yebasa inoda zvikwata zvinogamuchira 'yakagoverwa hutungamiri' nzira.
NextMapping ™ yezvikwata zvinobatsira kuvaka vavandudziro yehunyanzvi hwekuvandudza, agility uye kufanoona.
Mune ramangwana, kubudirira kwechikwata kunenge kuri kugona kwavo kuzvibata. ”
NextMapping ™ Matimu Akagadzirira Akagadzirira - Maitiro Ekugadzira Anogadzikana, Anochinjika & Anovandudza Matimu
Iyi ramangwana rechidimbu rechikwata rinopa kutsvagira uye marongero pane ramangwana rezvikwata uye nekuziva nzira iyo timu yezvikwata iri morphing kusangana nenguva chaiyo yekuvhiringidzwa uye zvinodiwa nenyika zvinokurumidza kuchinja. Tsvagiridzo inoratidza kuti zvikwata zvidiki zvine vanhu vakakurudzirwa uye vanobatika vanokwanisa kugadzira uye kuita nekukurumidza. Iko kukanganisa kwebhizinesi kune zvikwata zvepamusoro zvinoita nemano nekukurumidza kutengesa, kukonzera mhinduro dzezviitiko zvevatengi uye pakupedzisira kukwikwidza mukana.
Ramangwana rakagadzirira kugona kwehunyanzvi hwezvikwata
Iwo matimu ane akasiyana akasarudzika budiriro yekuvandudza zvinangwa uye matambudziko sezvavanoshandira kugadzira zvinoshamisa mhedzisiro yevatengi nekambani. Matambudziko iwayo anosanganisira kujairana neicho chinokurumidza kukurumidza kuchinja kweicho shanduko, kushanda pamwe nekubatana nehunhu hwakasiyana, zvizvarwa zvakasiyana, zvikwata zviri kure uye maonero akasiyana. Yedu yakasarudzika murairidzi nzira yekubatsira zvikwata kufamba 'izvo zvinotevera' inopa yedu NextMapping ™ inyanzvi yekuvandudza chirongwa kune zvikwata kuti zvinyatso kutungamira shanduko dzinodiwa kuti dzive dzinogadzirira ramangwana.
Ramangwana rebasa online online
Mune ramangwana rebasa munhu wese achazove mutungamiri anoshanda mune yakagoverwa hutungamiri tsika. Izvi hazvireve kuti kune boka rakazara revanhu vane mazita ehutungamiriri - zvinoreva kuti tsika yacho pachayo inotariswa kumunhu wese anotora basa rakazara nezvakawana, kuvaka 'kushaya hanya' hunyanzvi uye kuwedzera kugona kwemumwe neumwe wekubatana pamwe nekuvandudza kumhanya nekukurumidza. Yedu yemberi yepamhepo yebasa revashandi vekuvandudza makosi vhidhiyo yakavakirwa uye inogona kutorwa neye kana pasina tsigiro yemurairidzi.
Vaka yako InoteveraMapa™ ronga zvikwata
Matimu akaumbwa nevanhu uye vanhu vakasiyana. Izvo zvinangwa zvehunyanzvi zvekusimudzira zvikwata mune ramangwana rebasa zvinosanganisira kuwedzera kukura '' kwandiri kune isu 'mafungiro. Kushandira pamwe kwechokwadi kunemunhu wese anovaka kuzviziva, kuzvitarisisa, uye kugona kwehunyanzvi. Nekutevera kweNe NextMping ™ isu tinobatsira kuongorora simba revanhu pazvikwata, tinoongorora simba rechikwata seboka uye tinopa mhinduro nezvirongwa zvezvikwata kuti zvikwanise kushanda pamwechete nekutarisa zvakanyanya, kukurudzira uye kuwirirana.
Vandudza timu yekudyidzana
Matimu ari kushanda pamwe nekuwedzera zvakanyanya kupfuura nakare kose, nguva dzakaomarara, tarisheni hombe uye kudzvinyirira kuri kuita kuti zviitwe zvakanyanya nezvishoma. Kazhinji zvikwata zvinoremerwa pasi mumabasa uye izvo zvinoda kuitwa nhasi uye kashoma kuwana mukana wekutarisa pakugadzira uye kugadzirira zvingavhiringidza. Nekutevera kwedu kweNextMping ™ yezvikwata isu tinopa zvishandiso uye chirongwa chebudiriro ye NextMping ™ yekubatsira nhengo dzezvikwata kuona ramangwana, nekugadzira mafungiro ekuumba uye kuvaka nzira dzekuti zvikwata zvishande pamwe.
Takakufukidza - tsvaga zvimwe nezve maitiro ekuvaka zvikwata zvakagadzirira mune ramangwana munzvimbo yebasa - svikira isu tinoda kubatana newe.